Yintoni ecingwa njenge-PSAT?
Jonga ulwazi lwangoku kwinqanaba le-PSAT
Ukuba uthathe i- PSAT entsha eyaqala ukuqala ngo-Oktobha 2015, unokuzibuza ukuba izikolo zakho zithintela njani xa kuthelekiswa namanye amazwe. Kwingxelo yakho yamanqaku, uya kubona amanqaku akho kunye nama-percentile, kodwa yintoni impawu ezilungileyo ze-PSAT? Uyazi njani ukuba ngaba lakho lisehla? Nazi iirhafu, ngokusekelwe kulawulo luka-Oktobha 2016.
Nceda uqaphele ukuba abafundi banako ukufumana ama-320 ukuya ku-1520 njengamanqaku onke, kwaye phakathi kwe-160 ukuya ku-760 kumacandelo okuFunda nokuBhala okusekelwe kuMatriki noBungqina.
Amanqaku amanqaku amanani nje kuphela amanani amabakala amacandelo amabini.
2016 I-PSAT Amanqanaba Aphakathi kwe-10 graders
Ukufunda nokuBhala ngokuSebenzayo: 468
Inani elipheleleyo: 933
2016 I-PSAT Amanqanaba Aphakathi kwama-graders ayi-11
Ukufunda nokuBhala ngokuBonisa: 507
Inani elipheleleyo: 1009
Inkcazo yoKhetho lweeNgxelo ze-2016
Kwakhona kubhalwe kwi-PSAT yakho yeengxelo ngephi ye-Selection Index (SI). Ngokumalunga neengxelo zakho zecandelo lonke, uza kufumana amanqaku okuvavanya ngamnye okuFunda, ukubhala nokuLwimi, kunye neMathe, ngoko unokubona indlela oye wazenza ngayo loo mvavanyo. Lawo manqaku avela ku-8-38. Yaye isibalo sala manani sandiwe nge-2, sisiqendu sakho se-Index Selection.
Ngokomzekelo, ukuba ufumene i-18 ekuFundeni , i-20 ekuBhaleni naseLwimi , kunye ne-24 kwiMathematika , isiqendu sakho se-Index Selection siya kuba ngu-124 kuba 2 (18 + 20 + 24) = 124.
Isiphumo se-Index Selection sibalulekile kuba i-National Merit Scholarship Corporation (i-NMSC) isebenzisa ukuba iqeshwe ngabafundi abathile ukuba bafumane ukuqaphela kwiNkqubo yeSizwe ye-Merit® Scholarship Programme.
Yingakho uza kubona i-PSAT ebhaliweyo njenge-PSAT / NMSQT. Inxalenye ye "NMSQT" ibhekiselele kwi- National Merit Scholarship Qualifying Test. Ngelixa i-PSAT ayiyona into eyenziwa kwiikholeji zokubakholwa kweekholeji (i-SAT), kubalulekile ukuhlolwa kwabafundi abanamandla abanokufaneleka kwi-National Merit Scholarship.
Esi sizathu esinye sokuba iindaba ze-PSAT .
Izikolo ze-PSAT VS. SAT izikolo
Ekubeni i-PSAT yenzelwe ukubonisa indlela enokuthi uhambe ngayo kwi-SAT yangempela, yinto efanelekileyo ukuzibuza, "Yiyiphi inqaku elihle le-SAT?" I-PSAT yilingo olubalulekileyo lokufaneleka kwi-National Merit Scholarship, kodwa ayiyi kufikelela ekholejini. Ukuba umgangatho wakho we-PSAT ungaphantsi kweeprayimari zikazwelonke, ngoku ngoku lixesha lokulungiselela iSAT. Isaphulelo sakho se-SAT (phakathi kwezinye izinto ezifana ne-GPA, imisebenzi yangaphandle , iiyure zokuzithandela, njl njl.) Inquma ukuwamkelwa kwakho kwiiyunivesithi kunye neziqinisekiso zokufunda.
Ukuba uthathe i-PSAT ngo-2014, usebenzisa i-version yangaphambili ye-PSAT uvavanyo endaweni yengxelo ekhoyo yangoku, uvavanyo oluboniswe ngezantsi luya kubonakala luhluke kakhulu kumanqaku anikezelwa ngoku.
Kwimiqulu endala yovavanyo, uya kufumana amanqaku kwicandelo ngalinye - UkuFunda okuBalulekileyo, iMathematika nokuBhala. Lawo manqaku aphuma ukusuka kuma-20 ukuya ekupheleni ekupheleni ukuya kuma-80 ekupheleni kweyona ndawo ephezulu, ehambelana ngqo neenguqu endala ye-SAT yamanqaku angama-200 kwisiphelo esiphantsi ukuya kuma-800 ekupheleni.
I-grade ye-11 ye-PSAT Izikolo ze-2014:
Ukufunda okubalulekileyo: 46.9
I-grade 10 ye-PSAT izikolo ze-2014:
Ukufunda okubalulekileyo : 42.1
5 Iingcamango ezikhumbuza ingqondo ezivela kwi "Umfazi weZookeeper"
Izizathu ezi-5 zokuya kwisikolo samabanga aphakamileyo
Indlu yasekhaya - ngokwenene? Ngubani owakhiwa ekhaya?